Posted by Tranquillus | May 21, 2018 | Luqadda shisheeye
Haddii luuqadaha ajnabigaa aysan ahayn mawduuca aad jeceshahay, haddaad tahay qof weyn oo aad ku qanacsan tahay inaadan ku qancin.
Laakiin marnaba ma soo daahday si ay u bartaan luuqad cusub, hubaal ma noqon doonto mid aad u fudud, laakiin waa suurtogal oo waxay soo bandhigaysaa faa'iido kaliya.
Haddii aad weli shaki ka qabtid, waxaa jira sababo wanaagsan oo lagu baranayo luqad shisheeye.
Si aad safar ugu tagto:
Socdaalku waa waayo-aragnimo farxad leh, laakiin haddii aadan ku hadlin luuqada dalka ama Ingiriisiga way adkaan kartaa.
Haddii aad go'aansatay inaad safar tagto, waa inaad la kulantaa dadka oo ogaato dhaqankooda, markaa tani waa sababta ugu horeysa ee loo barto luuqad shisheeye.
Dabcan, haddii aad sanad walba socdaalayso lagama maarmaan inaad barato luqadda dal kasta.
Ingiriisku caadi ahaan waa ku filan yahay in la fahmo.
Si loo kobciyo xirfadle:
Maalmahan, Ingiriisku wuxuu ku dhowaadba ku qasban yahay meelaha qaarkood.
Shaqooyinka qaar ayaa si fiican loo bixiyaa markaad ku hadasho luqad shisheeye.
Saddex luqadood ayaa si gaar ah loogu mahadcelinayaa qorayaasha, kuwaas oo kala ah Ingiriisi, Isbaanish iyo Jarmal.
Barashada luqad cusub sidoo kale waxay noqon kartaa qayb ka mid ah beddesho jihada ama jihada.
Intaa waxaa dheer, way fududahay in lagu wareejiyo dibadda, haddii qorshehaaga xirfadeed uu sii wado shirkad isku mid ah adoo bedelaya jawiga.
Si aad maskaxda uga ilaaliso qaab wanaagsan:
Iyadoo la yaab leh sida ay u muuqato, barashada luuqad cusub waxay noqon kartaa isboorti dhab ah oo loogu talagalay meninges.
Cilmi ayaa muujiyay in bilinguals lahaa malleability ah iyo dabacsanaan garashada ka xoogbadan ka badan kuwa la hadlay mid ka mid ah afka oo kaliya.
Waxay si ka wanaagsan u maareeyaan munaasabadda, ka horjeeda iyo inay yeeshaan karti fiican oo ay ku dheehan tahay.
Xirfadahaas waxay kuugu adeegi doonaan si fiican shaqada ama noloshaada gaarka ah.
Aqoonta luqad labaad iyo horumarinta lahaa sirdoonka afka, tababar fikradeed, sababaynta dhamaystiran iyo kicin helitaanka salka xeerarka si ay u xaliyaan dhibaatooyinka.
Sidoo kale waa hab weyn oo loola dagaalamo maskaxda maskaxda iyo gaar ahaan cudurka Alzheimers.
Si aad u bilowdo caqabad cusub oo shakhsi ah:
Ogaanshaha luqad cusub waa run ahaantii dheregto maalin kasta: caawiyo dalxiis, ka hor tago oo la hadal rakaab ah oo ku saabsan tareenka, si ay u sheegaan a "qarsoon" in ay saaxiib la ah kuwaas oo luqad isku mid ah ku hadla oo aan ka werwerayn oo ku saabsan inta kale ee kooxda, si ay cilmi internet afka bartay, iwm
Kuwani waa jacayl yar, waxaan ku siinayaa, laakiin waxa farxad leh! Ma aha in aad sheegto inaad ku faani doonto naftaada!
Maxaad u baraneysaa luqad cusub? Agoosto 25th, 2020Tranquillus
horeKoox shaqo oo wanaagsan
socdaSidee loo maamulaa xidhiidhka uu la leeyahay maamulkiisa?